Kedu ihe bụ bloatware na otu esi ewepu ya na android | Gam akporosis
Ignacio Sala | 18/06/2021 20:00 | Nkuzi
Agbanyeghị na ugbu a enwere ọtụtụ ndị na-akwụsị inye nkwado mkpanaka mkpanaka, anyị ka nwere ike ịchọta ọtụtụ okwu, nke ọnụ ya dị bupụrụ ngwa ndị arụnyere na anyị enweghị ike iwepụ ngwa ngwa na ngwaọrụ anyị site na isoro usoro ndị a na-emebu.
Ngwa ndị a aghọwo a jupụtara na ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, site na gam akporo na Windows, site na Linux, macOS na ọbụna iOS, ebe Apple na-ewebata usoro ngwa nke ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla ghara iji ya. A na-akpọ ngwa ndị a bloatware.
1 Gịnị bụ bloatware
2 Esi ewepu bloatware na gam akporo
2.1 Gbanyụọ ngwa ahụ
2.2 Iji ngwa ADB nke Google
2.2.1 Kwado ndị nrụpụta nhọrọ
2.2.2 Kwado Ọnọdụ Debugging USB
2.2.3 Hichapụ ngwa na Google ADB
2.3 Na ADB Ngwa Njikwa
2.3.1 Kwado ndị nrụpụta nhọrọ
2.3.2 Kwado Ọnọdụ Debugging USB
2.3.3 Budata ngwa ADB App Control
Gịnị bụ bloatware
Bloatware, nke a sụgharịrị dị ka bloatware, bụ set nke ngwa ndị na-abata na mbụ arụnyere na sistemụ arụmọrụ na ebe anyị nwere ike ịgụnye Chrome, ihe nchọgharị Google nke na-ebute tupu arụnyere na ekwentị niile na-abịa Google na gam akporo.
Dị ka anyị nwere ike ịtụle Chrome dị ka bloatware, a na-eji aha a eme ihe maka ngwa ndị ọzọ nke na-esighi na Google na enwere ike itinye ya na ọdụ ọ bụla n'ihi nkwekọrịta akụ na ụba nke onye nrụpụta ahụ ruru, dịka Facebook, Instagram, Flipboard, yana ngwa ndị ọzọ na-abaghị uru na egwuregwu nke anyị na-ebughị n'uche iji na ndụ.
Ngwa ndị a gbanyere mkpọrọgwụ na sistemụ arụmọrụ, yabụ anyị enweghị ike ihichapụ ha (n'ọtụtụ oge) dị ka a ga - asị na anyị nwere ike ihichapụ ngwa ọ bụla anyị na - ebudata na Playlọ Ahịa Play. N'ụzọ dị mma, e nwere ọtụtụ ụzọ na-enye anyị ohere iwepụ ngwa ndị a ka ha wee jiri anya ha kwụsị (ebe ọ bụrụ na anyị eweghachite ngwaọrụ site na ncha, ngwa ndị a ga-adị ọzọ).
Esi ewepu bloatware na gam akporo
N'oge wepu bloatware Na gam akporo ekwentị, anyị nwere nhọrọ nke 3 anyị, maka onye ọ bụla n'ime ha ọ dị mkpa ịnwe ikikere mgbọrọgwụ na ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ha chọrọ usoro usoro, usoro ndị nwere ike ịdị ntakịrị ma ọ bụrụ na ịnweghị ọtụtụ kọmputa ihe omuma.
Gbanyụọ ngwa ahụ
Nke a bụ usoro mfe mgbe wepụ ngwa, kama zoo ebe ọ na-ahapụ ụzọ dị n'ụdị mkpirisi na-akpọ anyị ka anyị wụnye ngwa ahụ ọzọ.
Iji zoo / kwụsị ọrụ na gam akporo, anyị ga-enweta ntọala nke ngwaọrụ anyị, ọkachasị na menu Aplicaciones ma họrọ ngwa anyị chọrọ izochi / kwụsị. Site na nhọrọ dị iche iche egosiri, anyị na-ahọrọ nhọrọ Gbanyụọ.
Ọ bụrụ na gbanyụọ bọtịnụ gbanyụrụ, ọ dịghị dị ka nhọrọ, yabụ naanị nhọrọ iji kpochapụ ya Ọ bụ site na nhọrọ abụọ m na-egosi gị n'okpuru.
Ngwa ndị ọzọ gosi iwepụ nhọrọ kama Gbanyụọ. Ndị a bụ ngwa ndị anyị rụnyere na ọdụ, ọ bụghị ngwa arụnyere na amaala na ngwaọrụ ahụ ma daba n'ụdị bloatware.
Iji ngwa ADB nke Google
Google ADB bụ ngwa ọrụ maka ndị mmepe Google nyere ndị niile chọrọ imepụta egwuregwu ma ọ bụ ngwa maka gam akporo. Ngwa a na - arụ ọrụ site n’iwu ọnụ, iwu nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ihichapụ ngwa na ngwaọrụ anyị.
Ma na mbụ,, anyị ga-ebu ụzọ mee ka nhọrọ maka ndị mmepe rụọ ọrụ wee rụọ ọrụ ọnọdụ nbipu USB.
Kwado ndị nrụpụta nhọrọ
Nke mbu na mbu bu rụọ ọrụ Mmepụta nhọrọ tupu oge eruo. Iji mee nke a, anyị ga-agbanye ugboro ugboro na nchịkọta nọmba nchịkọta dị na ngalaba ama ekwentị.
Kwado Ọnọdụ Debugging USB
Ọnọdụ debugging USB dị mgbe anyị gbanwere ọnọdụ onye nrụpụta. N'ime nchịkọta nhọrọ ahụ, na Debugging ngalaba, Anyị ga-eme ka nhọrọ USB debugging rụọ ọrụ.
Hichapụ ngwa na Google ADB
Ozugbo anyị mechara usoro abụọ gara aga, anyị ga-ebudata ngwa ahụ Google ADB na ịpị njikọ na-esonụ. Ngwa a dị maka abụọ Windows, dịka maka macOS na Linux.
Ozugbo anyị ebudatara faịlụ ahụ, anyị na-emeghe windo iwu na otu ndekọ ahụ ebe anyi megherela faịlụ nke anyi budatara, nke bu ebe a choro ngwa ndi di nkpa ka ha nwee ike inweta uzo Android anyi.
Ndepụta nke ngwa awụnyere na gam akporo ekwentị
Ọzọ, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịmata aha ngwa ahụ anyị chọrọ iwepụ na ngwaọrụ anyị. Iji mee nke a, anyị na-ede na akara iwu
adb shell pm ndepụta nchịkọta
Ọzọ, a ndepụta ga-egosipụta na aha nke niile arụnyere ngwa.
Ozugbo anyị matara aha nke ngwa anyị chọrọ iwepụ na ngwaọrụ anyị, anyị na-ede n'ahịrị ntimiiwu
adb shei pm iwepụ -k –user 0 ngwugwu-aha
0 bụ efu na n'ime ngwugwu-aha, anyị ga-ede akwụkwọ iji hichapụ, nke na nke a bụ flipboard.boxer.app.
Na ADB Ngwa Njikwa
Otu nhọrọ dị mfe, nke dị maka Windows, bụ iji ngwa ADB App Control, ngwa nke ahụ dochie anya iwu ntughari nke Google ADB nyere na windo, nke na-enye anyị ohere ịhọrọ ngwa ndị anyị chọrọ iwepụ na ngwaọrụ anyị.
Dị ka ọ dị na ngwa Google ADB, ọ dị mkpa -enyere ndị mmepe aka (site na ịpị ọtụtụ ugboro na nọmba ụlọ nke ụdị nke njedebe anyị).
USB debugging mode dị n'ime nhọrọ ndị nrụpụta, akpan akpan ke Debugging ngalaba. Iji rụọ ọrụ ya, naanị anyị ga-emegharị ngbanwe gaa n'aka nri ka o wee gosi na-acha anụnụ anụnụ.
Budata ngwa ADB App Control
Ọzọ, anyị na-ebudata ngwa ahụ ADB Ngwa Njikwa. Ngwa a dị naanị maka Windows, yabụ ọ bụrụ na ị nwere Mac ma ọ bụ kọmputa nke Linux jisiri ike ị ga-ajụ onye ị maara maka enyemaka.
Ngwa dị sụgharịa n'asụsụ Spanish, yabụ anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla n'ịghọta ngwa ngwa ya. Ozugbo anyị wụnye ngwa (usoro nwere ike iwe ọtụtụ minit
Ihe mbụ anyị ga - eme iji kpochapụ ngwa ndị etinyegoro bụ ịhọrọ onye ọ bụla n’ime ha. Ọzọ, na akụkụ aka nri ala nke ngwa anyị na-ahọrọ Iwepu.
Ọzọ, a na-egosipụta ịdọ aka ná ntị na-agwa anyị na ngwaọrụ ahụ nwere ike ịkwụsị ọrụ ọ bụrụ na anyị ewepu ngwa ọ bụla dị mkpa maka sistemụ ahụ.
Ọzọ, ọ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ndabere ngwa na anyị ga-ehichapụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịtinye ya ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ akwụsịla ịrụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Kedu ihe bụ bloatware na otu esi ewepụ ya na gam akporo